Maraykanka, 05 May 2019
Axad 5 May 2019
Congress-ka oo su'aalo weydiiyey Barr
War kasoo baxay ururka Booliiska Soomaalida Mareykanka
Kadib markii shalay ay maxkamad ku taala magaalada Minneapolis ay dambi ku heshay Maxamed Nuur oo horey uga tursanaa booliiska Minnepaolis ayaa Ururka ay leeyihiin xubnaha booliiska asalkoodu Soomaaliga yahay waxay soo saareen war saxaafadeed.
Maxamed Nuur oo danbi lagu helay
Guddi xeer-beegti ah oo todobaadyadi lasoo dhaafay eegayay dacwad dil ah oo lagu soo oogay Maxamed Nuur oo horay uga tirsanaa booliiska magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka ayaa ku helay laba danbi oo dil ah.
Mareykanka oo liiska argagixisada ku daraya Ikhwaanul Muslimiin
Aqalka Cad ayaa maanta sheegay in Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu ka fikirayo inuu ururka Akhwaanul Muslimiin uu ku daro liiska ururada orgagixisada.
Xeer-ilaaliye ku xigeenkii Mareykanka oo is-casiley
Ku xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee Mareykaka Rod Rosenstein, ayaa shaaca ka qaaday in uu is casilaayo islamarkaasina uu shaqada ka tagaayo 11-ka bisha May ee soo socota.
Dhageysiga dacwadda Maxamed Nuur oo soo dhamaatay
Waxa la soo gaba gabeeyay dhageysiga dacwad dil ah oo loo heysto Maxamed Nuur, oo ka mid ahaa ciidamada booliska ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnisota kaas oo asal ahan ka soo jeeda Soomaaliya.
Ilhaan: Rayid Ayaa ku Dhintay Duqeynta Mareykanka ee Soomaaliya
Ilhaan Cumar oo ka tirsan Congress-ka Maraykanka ayaa sheegtay in dad rayid ah ay ku dhinteen duqeynta ay diyaaradaha drone-ka ah ee Maraykanku leeyahay ka fuliyaan Soomaaliya , iyadoo sheegtay inay ka shaqeynayaan sidii magdhow loo siin lahaa ehellada dadkaasi.
Columbus: Maqaayad Soomaaliyeed oo Diyaarisa Biisa laga Sameeyay Oodkac
Iyadoo ay soo badanayaan dadka aan Soomaalida aheyn ee xiiseeya cunnooyinka Soomaalida ayaa maqaayadda ku taaalla magaalada Columbus, Ohio ee dalkan Mareykanka waxay billowdey iney sameyso bisa oodkac lagu sameeyey.
Trump: Shuruuc cusub halagu soo rogo dadka fiisaha ku soo galaya Mareykanka
Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump, ayaa toddobaadkan hindisay tallaabooyin cusub oo lagu xakameynayo dadka u soo sarfa Mareykanka ee ku soo gala fiisaha ka dibna si sharci darro ah isaga jooga Mareykanka marka uu fiisaha ama dal ku galku ka dhaco.
Q.M. iyo Mareykanka oo ka hadlay dhimashada rayidka ee Afghanistan
Ergayga gaarka ah ee Mareykanka u matalaya wada hadallada ay Washington kula jirto Talibanta Afghanistan, Zalmay Khalilzad, ayaa sheegay in jawaabta laga bixin karo in la yareeyo tirada dhimashada Afghanistan ay ku xiran tahay guul laga gaaro heshiis dhanka nabadda ah.
Joe Biden oo ku dhawaaqay in uu u tartamayo madaxweynannimo
Madaxweyne ku xigeenkii hore ee dalka Mareykanka Joe Biden ayaa saakay xilliga dalkaan Mareykanka ku dhawaaqay inuu ka mid yahay musharraxiinta xisbiga Dimoqraadiga ee doorashada sannadka 2020-ka dhaceysa Mareykanka xilka madaxweynaha kula tartami doonta madaxweyne Donald Trump.
Maraykanka oo Duqeyn ka Fuliyay Meel u dhow Jamaame.
Taliska Ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in Maraykanku uu shalay duqeyn ka fuliyay shalay meel ku dhow degmada Jamaame ee gobolka Jubadda Dhexe ee Soomaaliya, iyagoo halkaasi ku dilay laba ka mid ah maleeshiyada al-Shabaab.